Farmaajo: “Dhismaha Khatumo State waa dhaxalka aan Soomaali uga tagi doono” - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Farmaajo: “Dhismaha Khatumo State waa dhaxalka aan Soomaali uga tagi doono”
Farmaajo: “Dhismaha Khatumo State waa dhaxalka aan Soomaali uga tagi doono”
Madaxweyne Farmaajo oo xalay khadka taleefanka kula hadlay xildhibaano iyo waxgarad ka soo jeeda beesha Dhulbahante oo ku sugan Maraykanka iyo qaar shir uga socday dalka Turkiga ayaa u balan qaaday in uu dhisi doono Dowlad Goboleedka Khaatumo, howshii loo qorsheeyayna gabogabo ay hada marayaso.
Farmaajo ayaa sheegay in uu ka xun yahay in uusan wada-fulin balanqaadyadii uu beesha u balan qaaday laakiin uu hada ku talo jiro in saxo wixii khalad ah ee horay uga dhacay.
“ .. Abtiyaal siyaasi xantiisa ma moogo, waana ogahay dareenka jira, laakiin waxaas oo dhan waa la saxayaa, wasiirkana araintaan waan ka sheekeysanay, marka niyada qayr u sheega waxa badan ayaan idin soo socda”, ayuu yiri Farmaajo oo raali galin siinaya beesha Dhulbahante.
Isaga oo hadalkiisa sii wato ayuu yiri, “waad aragtaan Puntland waxa ay isku badashay maqaayad hal qoys leeyahay, kala qaybsanaantiina iyo naceybka dhexdiina ayaana laga faa’iidaystay, laakiin hada fursad ayaa ka jirta Puntland oo aad xaqiina ku dhacsan kartaan iyada oo waliba sharci ah”.
Farmaajo ayaa ku celceliyay in dhismaha Khaatumo uu dad badan kala hadlay uu kujiyo Garaadka iyo madax kale hadana uu go’aansaday in la dardar galiyo fulinta mashruucaas. Waxa uu yiri “ Waad aragtaan waxa ku dhacaya Cabdixakiin Dhoobo iyo beeshii Warsangali, xili ka fiican ma jirto ay labada beelood is bahaysan lahaayeen si loo xakameeyo cadaalad daarada ka jirta Puntland”.
Ugu danbayntii Farmaajo ayaa balan qaaday in uu dardar galin doono qorshahiisa la xiriira dhsimaha Dowlad Goboleedka Khaatumo State”. Waxa uu yiri “Dhismaha Khatumo State waxa ay noqonaysaa dhaxasha aan Soomaali uga tagi doono, gaar ahaan reer abtiyadeey, laakiin waa in aad midowdaan beelaha idinla dagana aad keentaan, anigu waxa aan wada hadalanay Suldaan Siciid”.
Hadalka Farmaajo ayaa ay u muuqata mid dhiirigalinaya colaad dhex marta dadka walaalaha ee wada dega Degaanada Sool iyo Sanaag iyo guud ahaan dhulka Puntland. Labo ascuub ka hor ayuu madaxweynaha Khatumo Cali Khalid Galayr Muqdishu kula kulmay Farmaajo iyo qaar kamida beesha Dhulmahante,.
Previous articleAfhayeenkii hore Wasaaradda Amniga oo Rumeeyey Xog ay MOL ka qortay Dhagxaanta Jid-gooyada Xamar..
Next articleQodobo noocee ah ayaa loo cuskaday xilka ka qaadista Gud. Dhoobo?
Mashruuc dhan 20 Malyun oo lagu maal-galinayo ganacsatada yar-yar iyo kuwa dhexe ayna fulinayaan Bankiyada Ganacsiga ee dalka qaarkood ayaa maanta heshiis lagu kala...
Wararka saaka ka imaanaya degaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Somaliland ay halkaasi dhaq dhaqaaqyo kala duwan ka wadaa, waxaana meel...
Xisbiyada mucaaradka qaar oo dacwad culus u gudbiyey maxkamadda sare ee...